Laba nooc oo xusuus ah oo OnePlus 7 Pro ah hadda laguma iibin doono Mareykanka | Androidsis
Way ka cadahay in Mareykanku yahay mid ka mid ah wadamada ay ka jirto isbedbedelka badan iibinta iyo iibsiga adduunka oo dhan. OnePlus ayaa tixgelineysa tan iyo, in kasta oo ay leedahay beel muhiim ah oo adeegsadayaasha ah iyo, intaa in ka badan, taageerayaasha dhulkaas, waxay ka saartay laba ka mid ah moodellada ay hadda ku shaqeyneyso degelkeeda rasmiga ah.
El OnePlus 7 Pro Waa terminaal wax-qabad sare leh oo shirkadda Shiinaha laga leeyahay ay daah-furtay bartamihii bishii May ee sannadkan iyada iyo shirkadda OnePlus 7. Mareykanka gudaheeda waxaa lagu soo bandhigay sharaftiisa oo dhan, laakiin hadda nooca 6 GB ee RAM oo leh 128 GB oo ah meel gudaha lagu keydiyo iyo 12 GB oo RAM ah oo leh 256 GB oo ROM ah ayaan hadda lagu iibinaynin meheraddooda.
Ilaa maanta, nooca kaliya ee OnePlus 7 Pro ee laga heli karo iibsashada websaydhka rasmiga ah ee soo saaraha ayaa ah 8 GB oo RAM ah oo leh 256 GB oo ah kaydinta gudaha ah. Tani waa wax lala yaabo waxayna naga dhigaysaa inaan la yaabno sababta noocyada kale looga saaray xusuusta. Waxaa suurtagal ah in shirkaddu rabto inay jarto buuggeeda dalkaas si ay ugu dhiirrigeliso dadka isticmaala inay iibsadaan qaar ka mid ah moodooyinka cusub ee OnePlus 7T y 7T Pro.
Qaabka 6GB RAM ee OnePlus 7 Pro ayaa laga bilaabay Mareykanka $ 669, halka noocyada 8GB iyo 12GB RAM ay si rasmi ah u bilaabeen iyagoo wata qiime dhan $ 699 iyo $ 749. Hadda, iyada oo salka iyo moodellada sare ay baxeen, nooca 8GB RAM ah ayaa haatan lagu iibinayaa qiyaastii $ 649 dukaan shirkadda ay ku leedahay internetka. Qiima dhimista ayaa yar, laakiin wali waa la qadarinayaa, laakiin maahan xaqiiqda ah in labada daabacaad ee kale ee xusuusta aan la heli karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » OnePlus ma sii wado bixinta laba nooc oo ka mid ah OnePlus 7 Pro mid ka mid ah suuqyada adduunka ugu waaweyn
Kaaliyaha Google wuxuu tijaabiyaa qaabkiisa cusub Pixel 3